Real Madrid Oo Halbawle Ka Doonaysa Man United, Newcastle Oo Boobaysa Juventus & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa - Laacib
Real Madrid Oo Halbawle Ka Doonaysa Man United, Newcastle Oo Boobaysa Juventus & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa
Erling Braut Haaland wakiilkiisa Mano Raiola ayaa la filayaa inuu bisha January wadahadalo uu xagaaga dambe kaga tagayo Borussia Dortmund lasii furo kooxda Manchester City. (Times, subscription required)
Raheem Sterling ayaa doonaya inuu hubiyo haddii uu door muhiim ah ku leeyahay qorshayaasha tababare Pep Guardiola kahor inta uusan bilaabin wadahadalada heshiis kordhinta . (Sun)
Liverpool ayaa doonaysa inay iibiso 28 sano jirkeeda Alex Oxlade-Chamberlain balse kaliya haddii ay qiimaha saxda ah ku hesho, kooxdiisii hore ee Arsenal ayaa xiisaynaysa. (Mirror)
Liverpool ayaa sidoo kale bilawday wadahadalada ay xagaaga dambe qaab bilaash ah kula wareegayso 24 sano jirka Barcelona ee Ousmane Dembele. (Mail, via Mundo Deportivo)
Phil Foden ayaa aad ugu dhaw inuu heshiis cusub u saxeexo Manchester City, qandaraaskiisa haatan ayaa ilaa 2024 gaadhsiisan. (The Athletic, subscription required)
Paul Pogba ayaa kusoo laabtay liiska xiddigaha diirada u saaran Real Madrid iyadoo heshiiskiisa Man United uu dhacayo xagaaga dambe. (AS – in Spanish)
Manchester United ayaa Chelsea iyo Juventus kula biirtay saxeexa khadka dhexe ee AS Monaco ee Aurelien Tchouameni. (Express)
Federico Chiesa iyo Matthijs De Ligt oo labaduba Newcastle United u ciyaara ayaa ku jira liiska xiddigaha ay doonayso Newcastle United. (Tuttosport, via Football Italia)
Southampton ciyaartoydeeda ayaa filanaya in tababare Ralph Hasenhuttl la caydhin doono toddobaadyada soo socda, kooxda ayaan wali xilli ciyaareedkan guul gaadhin. (Football Insider)
Antonio Rudiger ayaa dookhyada uu haysto qiimayn ku samayn doona kahor inta uusan mustaqbalkiisa go’aamin, 28 sano jirkaas ayuu heshiiskiisa Chelsea ee haatan dhacayaa xagaaga dambe. (Sky Sports)
Southampton,Tottenham iyo West Ham ayaa xiisaynaya saxeexa 28 sano jirka goolhayaha ah ee kooxda West Bromwich Albion ee Sam Johnstone. (Hampshire Live)
AC Milan khadkeeda dhexe ee Franck Kessie wakiilkiisa ayaa been abuur ku sheegay wararka sheegaya inuu Inter Milan kala hadlay arrimaha 24 sano jirkaas oo heshiiskiisu xagaaga dambe dhacayo. (Calciomercato, via Football Italia)
Daafaca midig ee Hector Bellerin ayaa qishay inuusan doonayn inuu ku laabto Arsenal xilli uu hal sano oo amaah ah ugu maqan yahay Real Betis. (El Desmarque, via Mail)
Leeds United ayaa ku dhaw saxeexa 17 sano jirka weerarka kooxda Espanyol ee Mateo Joseph Fernandez, Leeds ayaa u bandhigtay iibkiisa lacag £450,000 ah balse Espanyol aya 1 Milyan pound doonaysa. (Team Talk)
Real Madrid ayaa xiisaynaysa inay Tottenham dib ugala saxeexato daafaca bidix ee Sergio Reguilon kahor bilawga xilli ciyaareedka dambe. (Defensa Central, via Express)
Bal inaa i fahnsii khabiir isku sheega waxan qorayoo
Federico Chiesa iyo Matthijs De Ligt oo labaduba Newcastle United u ciyaara ayaa ku jira liiska xiddigaha ay doonayso Newcastle United